Iindaba -ukuphosa iglasi yamanzi, ukunikezela, iringlock scaffolding, isixhobo sokudibanisa, isixhobo sokudibanisa
Ukuphosa okuncinci, umahluko omkhulu! Kutheni le nto sinyanzelisa ukusebenzisa inkqubo yeglasi yamanzi? (1)
Ukulahla yinxalenye yexabiso eliphezulu le- Ukutsalwa kwe ringlock izincedisi, umgangatho uchaphazela ngokuthe ngqo uzinzo kunye nokhuseleko lwe Indawo yokunxibelelana kunye nobomi benkonzo ye ukuwela, ke kukhetho lokuphosa, kufuneka sipholishe namehlo ethu. Namhlanje singathanda ukuthetha malunga nokuphoswa.
Eyona nto iphambili ekwenziweni kweefreyimu zeringlock zezi: izihlanganisi zeleja, izihlanganisi ezidityaniswe ngentsinjana / ngeplangana nezihlanganisi. Okwangoku, zimbini iinkqubo eziphambili ze-ringlock scaffolding castings, enye yintlabathi, enye iglasi yamanzi, yintoni umahluko phakathi kwezi nkqubo zimbini, kufuneka sikhethe njani? Makhe ndibelane nawe ngamava ethu.
Ukuchaza inkqubo yentlabathi kunye neglasi yamanzi
Iglasi yamanzi eyahlulayo
Iglasi yamanzi njenge-binder kunye ne-quartz yesanti ixutywe kumlinganiso othile wokwenza isanti yokubumba, ephiliswa ngokuvuthela ikharbon diokside emva kokwenza ukungunda, emva koko ukungunda kuphakanyiswe, kuvaliwe kugalelwe ukujulwa.
Isanti ye-quartz ishushu kumatshini wokuxuba isanti, kwaye i-resin, i-arhente yokunyanga kunye ne-anti-cementation agent ziyongezwa ukwenza umphezulu wesanti ye-quartz ugqunywe luthotho lwefilimu yentlaka. Emva kokuba ukuxubana kufana, isanti ye-quartz iyakhutshwa ukuze ipholise kwaye ityumze ukulinda, kwaye ukusetyenziswa kufuneka kufudunyezwe kwaye kuphiliswe.
Ngokubanzi, imveliso yesanti iphakame kakhulu, ixabiso eliphantsi; Imveliso yeglasi yaManzi iphantsi kwaye iindleko ziphezulu. Ngokwexabiso lentengiso, ixabiso lezihlanganisi zeglasi yaManzi ngamaxesha ama-2 kunesihlanganisi esenziwe ngesanti!
Ixesha Post: Apr-25-2021